Nest Cam matipi uye manomano: Wana zvakanyanya kubva kuNest makamera ako - WebSetNet
By Justin26 | June 20, 2021
Google Nest ine akati wandei michina mukati mayo portfolio, kubva iyo Mhoro vhidhiyo bhero ku Nest Kudzidza Thermostat yekudziya zvine hungwaru.
Inopawo akachenjera kumba makamera zveimba nekunze mukati iyo Nest Cam IQ, Nest Cam Kunze uye Nest Cam IQ Kunze.
Heano akanakisa matipi uye manomano atauya nawo kuve nechokwadi kuti uri kuwana zvakanakisa kubva kune yako Nest Cam.
Nest Cam yakajairwa matipi ekushandisa uye manomano
Maitiro ekubatanidza yako Nest Cam kusvika kuGoogle Nest Hub
Vhura iyo Google Kumba app> Dhinda '+' pakona yepamusoro kuruboshwe> Dhinda 'Seta mudziyo'> Dzvanya pa 'Zvishandiso zvitsva'> Sarudza imba yako Nest Hub yakabatana ne> Yako Nest Cam inofanira kuwanikwa seimwe yeiyo zvishandiso> Tevedza rairo kuti uwedzere kumba kwako.
Paunenge wabatanidzwa, iwe unozokwanisa kubvunza Google Assistant kuendesa maonero kubva kuNest Cam yako chero nguva pane yako Nest Hub kana Nest Hub Max.
Maitiro ekuwedzera Google Mubatsiri kuNest Cam yako
Iyo Nest Cam IQs ficha yakavakirwa-mukati Google Mubatsiri kugona, zvichireva kuti iwe unogona kubvunza yako Nest Cam IQ kutarisa traffic, kudzora Nest Thermostat yako, kumisikidza timer, kana kupindura mubvunzo iwe waungave wakaita Googled pafoni yako, semuenzaniso .
Iwe zvakare uchakwanisa kudzora inopindirana smart zvishandiso pamba uye Google Assistant icharamba ichishanda kunyangwe kamera yako yeNest Cam yadzimwa.
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane chaicho chikafu pane iyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog iri kumusoro kurudyi kona> Dzvanya pa 'Wedzera Google Mubatsiri'> Sarudza 'Tanga'.
Maitiro ekuronga iyo Nest Cam
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi kona> Dzvanya pa 'Chirongwa'> Toggle Chirongwa chadzima.
Kana zviripo, unogona kuronga kana iwe uchida kuti Nest Cam idzime uye zvinokwanisika kuronga kakawanda pazuva rega rega. Iwe unofanirwa kuseta yega purogiramu yezuva rega rega revhiki, asi zvinogona kunge zvakafanana.
Chii chinonzi Imba / Kure Kunobatsira uye unoibatidza sei kuNest Cam?
Imba / Kure Kunobatsira chinhu chinoona iyo Nest Cam inoshandisa nzvimbo yefoni yako kuvhura paunobva pamba uye kudzima paunodzokera kumba.
Inodarika hurongwa hwako hweNest Cam saka kana uine Kumba / Yekubatsira yakavhurwa uye nhengo dzese dzemhuri yako yeNest dzabva pamba, iyo Nest Cam inozovhura otomatiki, kunyangwe kana hurongwa hwakagadzirirwa kuti Nest Cam idzime.
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog iri kumusoro kurudyi kona> Dzvanya pa 'Kumba / Kunze Kubatsira'> Toggle on kana kudzima.
Maitiro ekushandura chinja iyo Nest Cam mamiriro mwenje
Mamiriro emwenje kumusoro kweNest Cam anogara achiratidza mamiriro ekubatanidza uye kuratidza dambudziko. Izvo zvakare zvichagara zvichiratidza kana vhidhiyo yekurekodha iripo ine yakasimba yakasvibira mwenje, uye kana mumwe munhu achiona vhidhiyo neinobhenekera girini girobhu. Iwe unogona kuchinja kupenya kwechimiro chemwenje hazvo.
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi kona> Bhururuka pasi ku 'Status Chiedza'> Sarudza pakati Yakaderera, Yakakwira uye Auto .
Maitiro ekuvhura kana kudzima maikorofoni yeNest Cam
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi kona> Bhura pasi pasi ku 'Microphone'> Toggle on or off.
Kana yadzimwa, kutepfenyura odhiyo uye odhiyo yekurekodha zvichadzimwa.
Maitiro ekuvhura kana kurekodha odhiyo paNest Cam
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog iri kumusoro kurudyi kona> Bhura pasi pasi ku 'Microphone'> Toggle on kuti uwane 'Audio Kurekodha' kumisikidza> Toggle 'Audio Kurekodha' kuvhura kana kudzima.
Maitiro ekuvhura yambiro yeKutaura uye Teerera
Iyo Nest Cam inopa chinhu chinonzi Taura uye Teerera, icho chinokutendera iwe kuti utaure kune avo vari mune imwechete kamuri seNest Cam kuburikidza neiyo Nest app. Mune masystem, zvinokwanisika kuvhura chime kuti utariswe kune avo vari mumba usati wataura.
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog iri kumusoro kurudyi kona> Bhura pasi pasi kuti 'Taura uye Teerera Toni'> Toggle on.
Maitiro ekutaura kuburikidza neNest Cam
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya pane maikorofoni icon iyo inoti 'Taura' pazasi pechiratidziro> Kutanga kutaura> Dhinda 'Done' kana wapedza.
Iwe unofanirwa kuona kuti maikorofoni yeNest Cam iripo kana iwe uchida kunzwa chero mhinduro.
Ungachinja sei nzvimbo yemukamuri yeNest Cam yako
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane chaicho chikafu pane iyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi kona> Bhura pasi pasi kuti 'Kupi' mune 'About' chikamu> Sarudza iyo imba yako Nest Cam iri mukati.
Maitiro ekuvandudza ako Nest Cam's Wi-Fi marongero
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi kona> Bhura pasi pasi kune 'Wi-Fi Kubatanidza'> Kutanga> Mira padhuze neako Nest Cam uye uine yako Wi-Fi password uye network zita rekupa.
Maitiro ekubvisa yako Nest Cam kubva kuNest account yako
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog iri kumusoro kurudyi kona> Bhura pasi pasi kuti 'Bvisa Kamera'> Bvisa.
Maitiro ekuziva yako Nest Cam's serial nhamba
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane chaicho chikafu pane iyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi kona> Bhura pasi pasi ku'Technical Info '.
Maitiro ekusaina kuNest Aware
Nest Aware chikuva cheNest chekunyorera, chinopa mukana kune zvimwe zvezvinhu zvikuru paNest Cam. Pasina iyo, iwe haugone kuwana kujairika kumeso zviyeuchidzo, zviitiko zvezviitiko kana nhoroondo yevhidhiyo uye haugone kugovera clip chero.
Iwe haugone kusaina kuNest Aware kuburikidza neiyo Nest app hazvo. Pane kudaro, iwe uchada kusaina muakaundi yako Nest account paNest webhusaiti - www.muned.net.com - uye gadzirisa kunyorera kwako kubva ipapo.
Nest Cam vhidhiyo matipi uye manomano
Maitiro ekuvhura kana kudzima yako Nest Cam
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog iri kumusoro kurudyi kona> Toggle iyo 'Kamera' kuvhura kana kudzima.
Maitiro ekuona yako Nest Cam vhidhiyo nhoroondo
Uchada a Nest Aware kunyoreswa kuona vhidhiyo nhoroondo. Iyo yakachipa pashiri sarudzo inopa mazuva makumi matatu evhidhiyo yechiitiko nhoroondo, asi hapana vhidhiyo nhoroondo, nepo iyo Nest Aware Plus inopa mazuva makumi matanhatu evhidhiyo chiitiko chenhoroondo uye gumi-mazuva enhoroondo yevhidhiyo.
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam> Tinya pane iyo kalendari icon muzasi kuruboshwe rweapp> Tapira pazuva raunoda kuona vhidhiyo vhidhiyo kubva.
Ongorora: Mazuva anowanikwa anoratidzwa mune rakasviba grey uye sarudzo dzichava 30-mazuva kana 60-mazuva zvichienderana nekunyorera iwe kwaunosarudza.
Maitiro ekusefa zviitiko pane yako Nest Cam nguva
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya pamatanho ekumusoro pamusoro petemu> Sarudza mhando dzezviitiko zvaunoda kuti zvionekwe mune yako nguva> Zvaitwa.
Maitiro ekuona kuongorora nekukurumidza nezve izvo zvaitika pane yako Nest Cam
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya pamitsetse yakatwasuka kumusoro kwenyaya yako yenguva> Pfuura nepakati kuti uone kutarisa nekukurumidza kwezviitiko zvikuru zvakaitika pamberi peNest Cam yako.
Maitiro ekuchengetedza chiitiko pane yako Nest Cam nguva yenguva kune yako kamera roll
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya pachiitiko mukati meNest yako timeline iwe yaunoda kuchengetedza> Tapira pa 'Nyowani Clip' pazasi pechiso chako> Sevha kune kamera roll.
Ongorora: Izvo zvinongogoneka kusevha clip ine Nest Aware kunyorera.
Maitiro ekugovana chiitiko kubva kune yako Nest Cam nguva
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya pachiitiko chaunoda kugovana mukati meNest Cam yako nguva> Dzvanya pa 'Nyowani Clip' pazasi kurudyi rwechidzitiro chako> Goverana Bhatani> Sarudza yekugovana nzira.
Maitiro ekudzima yako Nest Cam vhidhiyo nhoroondo
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yenguva> Dzvanya pane iyo Zvirongwa cog mukona yekurudyi kona> Bhururuka pasi pasi kuzasi kwaunozoona 'Delete Vhidhiyo Nhoroondo' > Tinya pane 'Delete Nhoroondo'.
Kudzvanya izvi kuchabvisa zvachose yese nhoroondo yako yevhidhiyo yeNest Cam. Saved clip ichave ichiripo uye haizodzime yaunoziva zviso.
Ungachinja sei mhando yevhidhiyo uye data dhizaini yeNest Cam yako
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed kumusoro kweiyo Nest Cam nguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi kona> Bhura pasi pasi kune 'Unhu uye Bandwidth' mukati mevhidhiyo chikamu > Seta iyo Nest Cam yemavhidhiyo mhando pakati pePasi uye Yakakwirira.
Pane zvingasarudzwa zvina zveNest Cam vhidhiyo mhando. Nest inoti iyo Nest Cam inovavarira kushandisa chete 100GB pamwedzi pane yakaderera mamiriro, neese seti ichikwira ne100GB, zvichikonzera iyo Yemhando yepamusoro kumisikidza inovavarira kushandisa isingasvike 400GB pamwedzi.
Maitiro ekushandura Night Vision pane yako Nest Cam kuvhura kana kudzima
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam's timeline> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi kona> Bhururuka pasi ku 'Night Vision' muchikamu chevhidhiyo> Sarudza pakati Off , Auto uye Inogara Yakavhenekerwa.
Maitiro ekuvhura kana Kuvharisa Yekutevera Kutarisa kana kudzima
Kana yako Nest Cam ichinzwa kufamba, pane chimwe chinhu chinonzi 'Kuvhara-kumusoro Kutevera' iyo kana iripo, ichaona yako Nest Cam zoom mukati pane chiito otomatiki. Maonero anogara akafanana, asi iwe uchawana padhuze nemupinyi kana chero chakonzera kufamba kwenjodzi uye Nest Cam ichatevera kufamba.
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi kona> Bhura pasi pasi ku 'Close-up Tracking View' muchikamu chevhidhiyo> Shandura kana kuvhara.
Maitiro ekutenderera mufananidzo weNest Cam yako
Zvichienderana nezvamakamisikidza yako Nest Cam, kana nemabatiro awakaiisa, ungangoda kuvhura yako vhidhiyo 180-madhigirii.
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane chaicho chikafu pane iyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi kona> Bhura pasi pasi kuti 'Rotate Image'> Toggle on kutenderera vhidhiyo.
Maitiro ekugonesa Nest Cam kugovana
Nekutadza, chete nhengo dzeMhuri Akaundi dzakabatana neyako Nest account ndiyo inokwanisa kuona yako Nest Cam vhidhiyo. Muridzi wemba anogona kuchinja izvi pa home.nest.com hazvo.
Enda ku www.nest.home.com > Pinda muakaunti yako yeNest> Dzvanya paNest Cam feed> Dzvanya pane cog yekugadzika mukona yepamusoro yekurudyi> Bhura pasi kusvika ku'Kamera Kugovana 'muchikamu cheVhidhiyo> Tapira paKamera Kugovana> Sarudza' Goverana nePassword 'kana iwe unoda chero munhu ane chinongedzo ne password kuti akwanise kuwana yako Nest Cam / Sarudza 'Goverana Ruzhinji' kana iwe uchida kuti chero munhu ane chinongedzo awane mukana kune yako Nest Cam> Tapira 'Bvumirana & Govana'.
Nest Cam ziviso matipi uye manomano
Ungachinja sei mhando yezaziso iwe yaunogamuchira kubva kuNest Cam yako
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tapira kamwe pane iyo mhenyu feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi kona yekona yako> Tapira pa 'Notification'> Notification Type> Sarudza 'Push Kuzivisa kana Email '.
Ungachinja sei kana wagamuchira zviziviso kubva kuNest Cam yako
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi yekona yako> Bata pa 'Notifications'> Vimba pa 'Nguva yekutumira '> Sarudza' Hapana munhu kumba 'kana' Nguva dzose '.
Maitiro ekuvhura maratidziro ezwi kubva kuNest Cam yako
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe pane chaicho chikafu pane pamusoro peNest Cam nguva yekuita> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi yekona yako> Tapira pa 'Notifications'> Ruzha> Toggle on.
Kana iripo, yako Nest Cam inokuzivisa iwe kana yanzwa ruzha rukuru, senge imbwa inohukura semuenzaniso.
Maitiro ekugadzirisa yako Chiitiko Chikamu zviyeuchidzo paNest Cam
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane chaicho chikafu pane iyo Nest Cam nguva yekutora> Tinya pane zvigadziriso cog mukona yekurudyi yekona yako> Vimba pane 'Notifications'> Tapira pane Chiitiko Nzvimbo iwe zvagadzira> Sarudza ndedzipi mhando dzezviitiko zvaunoda kuziviswa nezvazvo.
Maitiro ekugadzira iyo yakasarudzika Chiitiko Chiitiko paNest Cam
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi yekona yako> Bata pa 'Chiitiko Nzvimbo'> Gadzira Zone> Dhonza imwe neimwe denderedzwa kusvika iwe wagadzira iyo zone yaunoda> Tinya pane chishambwe kumusoro kurudyi kana iwe wapedza.
Maitiro ekuti utumidze tsika Chiitiko Chiitiko paNest Cam
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane chaicho chikafu pane iyo Nest Cam yenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi yekona yako> Vimba pane 'Yekuita Nzvimbo'> Dzvanya pane nzvimbo iwe unoda kutumidza zita> Tinya peni iri pakati kumusoro kwescreen yako> Nyora zita renzvimbo yetsika> Dzvanya pachikwekwe kumusoro kurudyi.
Maitiro ekudzima tsika Tsika Yezviitiko paNest Cam
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya kamwe chete pane iyo live feed pamusoro peiyo Nest Cam yekufamba kwenguva> Dzvanya pane yekugadzika cog mukona yekurudyi yekona yako> Bata pa 'Chiitiko Chikamu'> Dzvanya pane nzvimbo iwe unoda kudzima> Dhinda bhaini muzasi kwekona yekona> Simbisa Kudzima.
Nest Cam inozivikanwa kumeso matipi uye manomano
Zviso zvinozivikanwa chinhu chinongova chete Nest Cam IQ uye Nest Cam IQ Kunze vane. Iwe zvakare unozofanirwa kuve neNest Aware kunyorera cheichi chiitiko.
Maitiro ekudzidzisa yako Nest Cam yaunoziva iwe
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya pane 'Vanhu' pazasi pechiso. Iyo Nest app inoratidza vanhu vatsva vavakaona uye iwe unozobvunzwa kuti uone kana iwe uchiziva munhu wacho kana kwete.
Kana iwe ukasarudza hungu, kumeso kwevanhu vaunoti hongu kuziva kuchabuda mune 'Ona kuti ndiani kamera yako yatinoziva kare' chikamu chePeople tab.
Iwe uchazoziva kana paine vanhu vatsva vekusimbisa kutenda kune diki rebhuruu chiziviso dot iyo ichaonekwa mukona yepamusoro yekona yeVanhu tebhu icon pazasi pechiso chako.
Maitiro ekuona vanhu vanoziva Nest Cam yako
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya pane Vanhu pazasi pechiso. Kana pasina zviso zvitsva zvakaonekwa, skrini ichaonekwa ichiti: 'Makamera ako haasati aona chero munhu mutsva. Kana vachinge vawana, dzokera pachiratidziri ichi kuti uzviise mumapoka. '
Ichi chinyorwa chinoonekwawo mushure mekunge waudza Nest kana iwe uchiziva kana usingazive chero zviso zvitsva zvayakaona.
Mutsara pazasi mebhuruu unoti: 'Ona kuti ndiani kamera yako yatoziva kare'. Dzvanya pane izvi kuti uendeswe kune inozivikanwa zviso chikamu.
Maitiro ekugadzirisa mifananidzo mukati mekuziva kumeso raibhurari paNest Cam
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya paVanhu vari pazasi pechidzitiro> Vimba pa 'Ona kuti ndiani kamera yako yatoziva kare> Tapira pachiso chakazivikanwa chaunoda kugadzirisa raibhurari yemifananidzo ye> Press' Sarudza 'pakona yepamusoro kurudyi kwescreen yako> Sarudza mifananidzo yaunoda kudzima> Dhinda' Bvisa 'kuti ubvise raibhurari.
Maitiro ekugadzira uye kutumidza inozivikanwa chiso chimiro paNest Cam
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya paVanhu vari pazasi pechidzitiro> Vimba pa 'Ona kuti ndiani kamera yako yatoziva'> Tapira 'Sarudza' kumusoro kwekurudyi kwako> Sarudza mifananidzo yese ye chimiro chemunhu chaunoda kugadzira> Sarudza 'Unganidza'> Tapira 'Unganidza' zvakare.
Kutumidza zita iro raunoziva chiso: Tepa pakona kadikidiki yemifananidzo yemunhu waunoda kugadzira purofiti> Tinya paZita> Nyora zita ravo kana izvo zvaunoda kuvaidza> Press Return.
Maitiro ekuti utumidze zita rechiso chinozivikanwa paNest Cam
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya paVanhu vari pazasi pechidzitiro> Vimba pa 'Ona kuti ndiani kamera yako yatoziva'> Tapira pakona kadiki pechiso chechiso chaunoziva iwe chaunoda kutumidza zita> Vimba paZita. > Tora zita idzva raunoda kuvadaidza> Press Return.
Maitiro ekuwedzera mifananidzo kune inozivikanwa chiso paNest Cam
Nguva imwe neimwe Nest Cam painoona munhu, zvinova nani pakuvaziva, asi pano neapo iwe unofanirwa kuibatsira nekusimbisa mufananidzo unofanirwa kunge uri mukati mechiso chechiso chaunoziva. Kubatanidza mufananidzo wemunhu mumwe chete muprofile yavo, tevera matanho ari pazasi:
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya paVanhu vari pazasi pechidzitiro> Vimba pa 'Ona kuti ndiani kamera yako yaanotoziva'> Press Sarudza kumusoro kurudyi kwescreen yako> Sarudza mifananidzo yaunoda kuwedzera kumeso waunoziva uye kumeso kwaunoziva pachako> Sarudza Kubatanidza> Tapira Unganidza zvakare.
Maitiro ekubvisa yaunoziva chiso chimiro paNest Cam
Vhura iyo Nest app> Dzvanya pane yako Nest Cam feed> Tinya paVanhu vari pazasi pechidzitiro> Vimba pa 'Ona kuti ndiani kamera yako yaanotoziva'> Dzvanya pane sikweya thumbnail yechiso chakazivikanwa chaunoda kubvisa> Tapira pa ' Kanganwa chiso ichi '> Tapira Bvisa.
Maitiro ekudzora kujairika kumeso kuona paNest Cam
Vhura iyo Nest app> Tinya pane yako Nest Cam feed> Tinya paVanhu vari pazasi pechidzitiro> Vimba pa 'Ona kuti ndiani kamera yako yatoziva'> Tapira paMunoziva kumeso kuona> Vimba pane nzvimbo yeNest Cam kutendeuka kujairana kumeso kuonekwa kwakabviswa.
← Microsoft Outlook inowana inonyudza muverengi nezvazvino Windows Hofisi Ongorora yekuvandudza Iyo Caligula Mhedzisiro 2 Inowana Yakakura Trailer Kuratidza Gameplay & Zvimiro →